PATA mizara ny tsiambaratelon'ny fitantarana amin'ny matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany Nepal
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » PATA mizara ny tsiambaratelon'ny fitantarana amin'ny matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany Nepal
Ny programa PATA Human Capacity Building dia tetikasan'ny Fikambanana ho an'ny fampandrosoana ho an'ny Human Capital (HCD) manerana ny velaran'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Manararaotra ny tambajotran'ireo mpitarika indostria manan-talenta manerantany i PATA, ny Program dia mamolavola sy manamboatra atrikasa fanofanana natokana ho an'ireo masoivohon'ny governemanta, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, andrim-pianarana ary orinasa tsy miankina.
Ny PATA dia mamolavola sy mandrindra ny atrikasa, manome ny manam-pahaizana mitarika sy mifanakalo antonony eo amin'ireo mpandray anjara ary manolotra ny fomba fijeriny sy ny zavatra niainany manokana. Ny atin'ny atrikasa sy ny fandaharam-potoana, ao anatin'izany ny mombamomba sy ny isan'ny mpandray anjara, novolavolain'ny PATA miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny andrim-panjakana na fikambanana.
Ny faharetan'ny atrikasa dia mety miovaova hatramin'ny roa ka hatramin'ny roa andro, miankina amin'ny tanjon'ny fianarana, ary mety apetraka amin'ny toerana rehetra manerantany.